Ku saabsan Us-Ningbo Joiwo Qarax caddayn Technology Co., LTD
KU SAABSAN SHAQADAADA
Ningbo Joiwo Qarax-cadeyn Sayniska iyo Teknolojiyada Co., Ltd. waxay ku taalaa Guoxiangqiao Industrial Park, Yuyao City, Zhejiang Province line line Our wax soo saarka waxaa ka mid ah taleefanka aan caddeyn qarax, telefoonka aan cimilada, telefoonka jeelka iyo telefoonka kale ee dadweynaha. Waxaan soo saareynaa inta badan qeybaha taleefoonada annaga kaligeen waxeeyna naga siineysaa faa iidooyin badan qiimaha iyo tayada. Telefoonadeena waxaa si weyn loogu adeegsadaa jeelasha, iskuulada, weelka, batroolka iyo qodista saliida iwm taleefanadeena jeelka ayaa sidoo kale sumcad wanaagsan ka helay macaamiisheenna ku sugan USA, Yurub iyo Bariga Dhexe.
Warshaddeena waxaa loo wareejiyay goob cusub bishii Abriil 2012 iyada oo leh aag wax soo saar oo gaaraya 4,500 mitir murabac ah laguna qalabeeyay mashiinno wax soo saar iyo soo saaris casri ah Shirkadeenu waxay leedahay awoodaha R&D, wax soo saarka, isku imaatinka, tijaabinta, rakibaadda iyo adeegyada farsamada. Waxaan u hoggaansameynaa mabda'a "macaamiil-udub dhexaad ah" waxaanan had iyo jeer u hoggaansameynaa iskaashiga istiraatiijiyadeed ee muddada-dheer ee aan la leenahay macaamiisheenna, annaga oo ku dadaalayna inaan hormuud ka noqonno berrinka oo aan abuurno summad heerka koowaad ah.
Marka ugu horeysa ee aan ku siino xalal xirfadeed.
Waxaan ka shaqeynaa ganacsi caalami ah waxaanan diirada saareynaa Yurub, Aasiya iyo gobolada Afrika iyo dhisida xiriir adag oo lala yeesho macaamiisheena Si kastaba ha noqotee, noocyada alaabtu marwalba way kobcayaan iyadoo loo eegayo baahida macaamiisheena.
Adeegga Degdegga ah iyo Adeeg Muunadaynta.
Tayada iyo macaamilku marka hore waa heerkayaga.
Shirkad isku dhafan sayniska, warshadaha, ganacsiga.
Aqoon isweydaarsi Labaad
Dhismaha Wax Soo Saarka
Aqoon isweydaarsi Saxaafadeed
Soosaarayaal Xirfad Leh
Ku qanacsanaanta macaamilku waa ujeedkeena ugu dambeeya ee JOIWO. Waxaan sii wadi doonnaa inaan sii wanaajinno nidaamkeena maaraynta ganacsiga iyo nidaamka adeegga iibka kadib, sidaa darteed waxaan ku siin karnaa macaamiisha hareeraha shaqada taleefanka ugu fiican ee cadeynta qaraxa, taleefanka cimilada aan wanaagsaneyn, taleefanka jeelka iyo taleefanka kale ee shacabka u adkaysata burburka, oo ay taageerayaan adeegeena aadka u wanaagsan. Waxaan had iyo jeer ku dadaalnaa sidii aan u dabooli lahayn dhammaan baahiyaha macaamiisheena.